के तपाईको बच्चाको औंला चुस्ने बानी छ ? #ThumbSucking • Health News Nepal
Dr Mukunda Jha Kids thumb sucking problem
(बिडीएस, एमडीएस अर्थोडोन्टिक्स एण्ड डेन्टोफेसियल अर्थोप्याडिक्स )
बच्चाले तीन चार वर्ष सम्म औंला चुस्ने (thumb or finger sucking) बानी सामान्य मानिन्छ, तर त्यस पश्चात चाहिँ यसले मुख र दाँत सम्बन्धि थुप्रै समस्याहरु निम्त्याउन सक्छ।
बच्चाको अगाडीका माथिका दाँतहरु बाहिर निस्कने, औँलालाई धेरै समय सम्म तल्लो दाँत माथि अड्याउनाले गर्दा तलको दाँत भित्र जाने हुन्छ। यसले गर्दा overjet बढ्ने हुन्छ। निरन्तर र पटक-पटक रुपमा औंला चुस्ने बानीले गर्दा कसै कसैमा Anterior open bite देखिन सक्छ। अगाडीको तल्लो दाँतहरु माथि सम्म erupt हुन नसक्ने र पछाडीका दाँतहरु तल तल आउने ( supraerupt ) हुन्छ।
बच्चाको गालाका मांसपेसी (cheek muscles ) हरु खुम्चिने हुन्छ, जसले गर्दा माथिल्लो maxillary arch साँगुरो हुदै जान्छ र यसका कारण posterior crossbite देखिन्छ। Hypotonic upper lip र hyperactive mentalis activity देखिन्छ।
यस्ता बच्चाहरुको नङ् धेरै सफा देखिने गर्छ। यस्तो कुरा आमा-बुवाले ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ। बच्चामा parental care को कमी, माया र स्याहार सुसारको कमीले गर्दा यस्ता समस्या देखिने गर्छ। आमाले उचित स्तनपान गराउन नसक्नु , बोतलबाट बच्चा लाई दुध खुवाउनु (non-nutritive sucking habits) जस्ता कारणले गर्दा बच्चाको शारिरिक मात्र नभई मानसिक विकासको कमी समेत हुने गर्दछ।
यिनै बच्चाहरुमा पछि गएर औंला चुस्ने, पेन्सिल अथवा पेन टोक्ने बानी पर्ने हुन्छ जुन दाँत र मुखका लागि नराम्रो मानिन्छ।
यसका समाधान के-के हुन सक्छन ?
यस्ता समस्याहरु बच्चामा हुन्छन् र यदि तपाई अभिभावक हुनुहन्छ भने बच्चाको दिमाग divert गर्नलाई उनीहरु सित समय बिताउने, खेल खेल्ने र उनीहरुलाई खेलौनाहरु ल्याइदिने गर्नुपर्छ। बच्चालाई समय समयमा dentist अथवा orthodontist (braces specialist) सँग परामर्श तथा चेकजाँच गर्नुपर्छ। जहाँ उसलाई औंला चुस्ने बानि छोड्न हौसला मिल्छ।
कुनै कुनै बच्चामा औंला अथवा elbow bandage गर्नुपर्ने समेत हुनसक्छ। यदि यो बानी धेरै पछि सम्म रही रह्यो भने मुख भित्र विभिन्न खालका habit breaking appliance लगाउनु पर्ने हुन्छ र पछि गएर fixed orthodontic treatment गर्नुपर्ने हुन जान्छ।
Tags: Child HealthCorona Virus #Covid19Dr. Mukunda jhafixed orthodontic treatmenthabit breaking applianceHypotonic upper lip hyperactive mentalis activityorthodontist braces specialistThumb Sucking